Myanmar government must stop the widespread anti-Muslim HATE CAMPAIGN by radical Buddhists | Dr Ko Ko Gyi's Blog
« Kalaw Southern Shan State Myanmar 2012
Be careful with these dirty tactics Myanmar Military Cyber-troopers, your country will DISAPPEAR with the INVASION of UN forces »
(Facebook, Viber, G-talk , G-maiL, Twitter, Yahoo….စသည့်လူသုံးများသော အင်တာနက်ဝက်ဆိုက်များနှင့် အင်တာနက် အသုံးမပြုနိုင်သေးသော မြန်မာများသို့ Printထုတ်ပြီး မိတ္တူကူး၍ နီးစပ်ရာ မိမိပါတ်ဝန်းကျင်သို့ ဖြန့်ဝေပါ) …SEE HOW DIRTY THESE SIT KHWES ARE!
….ရန်ကုန်တိုင်း ပုဇွန်တောင်မြို့နယ် အခြေစိုက် (Islam Fraternal Society) NO SOCIETY…SEE HOW DIRTY THESE SIT KHWES ARE!
အစ္စလာမ်ညီညွတ်ရေးအသင်းမှ မြန်မာမွတ်ဆလင် အဖွဲ့ချုပ်ထံသို့ (Islam Dom in Myanmar) ခေါင်းစဉ်ဖြင့် ပြည်သိမ်းစီမံချက်ဆိုပြီး စားတမ်းတစောင်ကို တင်းသွင်းထားကြောင်း။ … …. ယင်းကိစ္စနှင့် စပ်လျဉ်း၍ မြန်မာမွတ်ဆလင် အဖွဲ့ချုပ်ခေါင်းဆောင်ပိုင်းတွင် တိုင်ပင်ဆွေးနွေးနေကြကြောင်း။ အစ္စလာမ်ဘာသာအတွင်းသို့ အဓမ္မသွတ်သွင်းခံထားရပြီး အစ္စလာမ်ညီညွတ်ရေးအသင်းနှင့်နီးစပ်သည့်မျိုးချစ် မြန်မာအမျိုးသမီးများထံမှ သိရပါသည်။
ယင်းပြည်သိမ်းစီမံချက်တွင် မဟာဗျူဟာ (၁၀)ခုနှင့် နည်းဗျူဟာ(၁၀)ခုပါဝင်ပြီး အလွန်ယုတ်မာ၍ အန္တရာယ်ကြီးမားသော စီမံချက်များဖြစ်ကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။
IF THEIN SEIN GOV failed to investigate and arrest the culprits…Thein Sein Min Aung Hlaing Shwe Mann and Khin Nyunt would be held responsible for the consequences…
Maung Maung ပေါက်ပန်းသေး ရေးထားတဲ့ လှုံ့ဆော်စာပါ…..အလွန်အန္တရာယ်ကြီးတဲ့ လုပ်ကြံမှုပါ….
Maung Maung Ko ဥဏ် နဲ တဲ့ သူ တွေ များ တဲ့ နေ ရာ မို့ ( အလွန်အန္တရာယ်ကြီးတဲ့ လုပ်ကြံမှုပါ… )…
Ko Ko Gyi This is the SECOND TIDE or STAGE of HATE SPEECHES. All the responsible governments must IMMEDIATELY investigate and ARREST all the culprits. If not it would like dosing with PETROL …any accident or wrong from any side or agent provocateurs’ pulling the TRIGGER could BURST INTO RACIAL RIOTS.
Myanmar government must stop the widespread anti-Muslim HATE CAMPAIGN by radical Buddhists @ https://drkokogyi.wordpress.com/2012/04/23/many-bamas-are-swallowing-the-hook-line-and-sinker/
Tags: Burma, Facebook, Khin Nyunt, Myanmar, Shwe Mann, Tatmadaw, Thein Sein, Twitter
This entry was posted on November 18, 2013 at 11:28 am and is filed under Uncategorized.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.